Xafiiska Difaacaha oo hoggaamiyay kormeerka u kuur-gelidda xaaladda goobaha dadka lagu xiro ee Puntland – Sawirro – Ophrd
Garowe, 11 Oktoobar, 2020 – Difaacaha Xuquuqda Aadanaha Puntland Siciid Cabdi Muumin ayaa hoggaamiyay wefdi isugu jira guddiyada Xuquuqda Aadanaha, Shuruucda iyo Caddaaladda iyo Anshaxa iyo Arrimaha Golaha ee Baarlamanka Puntland, kuwaas oo kormeer ku wajahan u kuur-gelidda xaaladda xuquuqd Aadanaha ee goobaha dadka lag xiro ku tiro magaalooyinka Galkacyo, Bosaso, Qardho iyo Garowe.
Kormeerkan ayaa ujeedadiisu ahayd u kuur-gelidda xaaladda xuquuqda Aadanaha ee goobaha dadka lagu xiro, dar-dargelinta adeegyada garsoorka iyo xaqiijinta wada-shaqaynta hay’adaha sharci-fulinta iyo hay’adaha garsoorka ee gobollada kormeerka lagu sameeyay, si loo hubiyo sugnaanta xuquuqda maxaabiista saldhigyada iyo kuwa ku jira xabsiyada.
Kooxda Kormeerku waxay kulan gaar ah la qaateen xubno ka mid ah maxkamadda ciidamadaha kala duwan ee madaniga iyo kuwa qalabka-sida oo ay kala hadleen dar-dargelinta kiisaska maxaabiista gar-sugayaasha ah iyo kuwa mudo dhaafka ku ah xabsiyada iyo saldhigyada.
“Ujeeddadu waa isla Isla xisaabtan, sixid iyo in la xoojiyo wada-shaqaynta dhinacyda ah bah-wadaagta ugu dhow ee caddaaladda” ayuu yiri Difaacaha Xuquuqda Aadanaha oo intaas ku daray in ay talooyin sharci siiyeen hay’adaha garsoorka iyo kuwa sharci-fulinta.
Docda kale, mudada kormeerka waxaa barbar socday tababar ku saabsan ka hortagga iyo maaraynta Karoona Fayrus oo loo qabtay 22 ka mid ah hawl-wadeennada caafimaadka ee xabsiyada waa weyn ee Puntland, iyadoona difaacuhu ku wareejiyay maamulka xabsiyada oo dhan dawooyinka ugu muhiimsan ee lagula tacaali karo maxaabiista xiran.
Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha Puntland ayaa sannadkiiba dhawr jeer wuxuu kormeer dastuuri ah ku sameeyaa goobaha kala duwan ee dadka lagu xiro, si loo hubiyo xuquuqda maxaabiista.
← Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha oo gogosha maxaabiista siiyay Xabsiga weyn ee Boosaso – Sawirro